Dawlada somaliland oo ka hadashey dilkii G.kuminshanka doorashooyinka Gobola Sool. - Wardeeq 24 TV Dawlada somaliland oo ka hadashey dilkii G.kuminshanka doorashooyinka Gobola Sool. Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dawlada somaliland oo ka hadashey dilkii G.kuminshanka doorashooyinka Gobola Sool.
Previous articleCarabta oo ka hadashey Qaraxii lagu diley ciyaartoyda jubaland.
Next articleMadaxweynaha Galmudug oo laga codsadey inuu soo gudbiyo liiska musharaxiinta.